के मेरी हजुुरआमा ‘रअ’ को एजेन्ट बनेर नेपाल आएकी हुन र ? -अध्यक्ष झा - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा आफ्नो राजनीतिक जीवनभर तराइ–मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा क्रियाशील छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा आपुर्ति मन्त्री भएका झा छिटो कुरा बुुझ्ने नेता मानिन्छन् । श्रीमति डा. डिम्पल कुमारी झालाई सांसद बनाएका उनको दल पनि मधेशी मोर्चामा आवद्ध छ । अंगीकृतलाई पनि वंशज सरह अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएका नेता झासँग नेपालपाटीले गरेको कुुराकानीः
तपाईहरुले नागरिकता सम्बन्धी सवाल संधै किस्ता किस्तामा उठाईरहनुुको कारण के हो ?
यो मधेशको सवैभन्दा पुरानो समस्या हो । हाम्रो समस्याका बारेमा राज्य कहिल्यै पनि सकरात्मक हुन सकेन । नागरिकता सम्बन्धी सवाललाई जहिले पनि भारतीयसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यो उचित हुन सक्दैन । जबसम्म राज्यले नागरिकता सम्बन्धी मधेशीको मागलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म उठिरहन्छ ।
अंगीकृत नागरिकलाई पनि वंशजसरह अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो होइन भनेर मधेशी मोर्चाकै नेता उपेन्द्र यादवले भनिरहनुु भएको छ । यो माग चाँही हो कस्को ?
कसले के भन्यो भनेर त्यता नजाऔँ । हामीले पनि सवै अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउनुुपर्छ भनेर माग गरेको होइन । हामिले मागेको त बैवाहीक अंगीकृतलाई राज्यको उपल्लो निकायमा जानबाट बन्चित नगरौँ मात्र भनेको हो । मधेशीलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा विभेद गरिएको छ । भारतको विहार, सीतामढी लगायतसाग हाम्रो सदियौँदेखीको रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ । भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा वर्षेनी हजारौँको संख्यामा चेलीबेटीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिन्छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने वैवाहीक अंगीकृतलाई विभेद गर्नु हुुदैन । यो आफ्नै हजुरआमा, आमा र श्रीमतिलाई विभेद गर्ने कुरा हो ।
अंगीकृत भन्नाले त पछी अंगीकार गरिएको नागरिक हो । तर विहे गरेर भोलिपल्टै नागरिकता पाउनेलाई किन एकै पटक यती धेरै अधिकार चाहियो ?
समस्या हाम्रो मानसिकतामा छ । भारत बाहेकका देशहरुबाट विवाह गरेर आउनेहरुले राष्ट्रघात नगर्ने तर सदियौँदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको भारतबाट आउनेले राष्ट्रघात गर्ने भन्ने हुुन्छ र ? हेर्नुहोस् अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिक रक्षा मन्त्री बन्न पाउने तर प्रधानसेनापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री बन्न पाउने तर कर्मचारी हुुन नपाउने व्यवस्था पनि हुुन्छ र ? मेरो हजुरआमा, आमा र श्रीमति तीन जना भारतबाट नेपालमा विवाह गरेर आउनु भएको हो । के उहाँहरु ‘रअ’ वा ‘सिआईए’ को एजेन्ट बनेर आउनुु भएको हो र ?
यहीँनेर झा जी, नेपालबाट भारतमा विहे गरेर जाने नेपाली चेलीले चाँही नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खनुपर्ने तर नेपालमा विहे गरेको १२ घण्टामा नागरिकता पाउँदा पनि किन असन्तुष्टि ?
के भारतमा नागरिकताको व्यवस्था छ ? यहाँका मानिसहरु थाहा नभएको कुरा गर्छन । मेरो मावली र ससुराली दुवै भारतमा पर्छ । त्यहाँ नागरिकताको व्यवस्था छैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई वंशजसरह अधिकार दिदा कुुन किसिमको राष्ट्रवाद हुुन्छ ? यो वाहियात कुरा हो । विहे गरेर आउने भनेको त कुल नै परिवर्तन गरेर आउने कुरा हो । छोरी जाँदा कुल छोडेर जान्छ भने बुुहारी आउँदा कुुलको सम्पुर्ण अधिकार बोकेर आउँछ । मेरो दिदी वा बहिनीलाई मेरो कुलमा प्रवेश गर्ने अधिकार छैन तर मेरो श्रमतिलाई छ । भनेपछी बुहारीलाई किन अर्को देशको नागरिक सम्झीने ? यो मिल्दै मिल्दैन ।
अंगीकृत नागरिक भएकै कारणले भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्नबाट बन्चित भइन । तर नेपालमा तपाईहरुले यही कुरालाई बटमलाईन बनाएर किन आन्दोलन गरेको ?
अरे ! सोनियाजी नागरिकताको कारणले प्रधानमन्त्री हुन नपाएको भन्ने कुरा गलत हो । उहाँ आफ्नै रुचीका कारण प्रधानमन्त्री नहुनुु भएको हो । भारतका प्रायःजसो नेताहरुसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । तर हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा नागरिकता मात्र होइन । प्रदेशको सीमा निर्धारणलगायतका अन्य कुराहरु पनि छन् ।
वैवाहीक अंगीकृतलाई मात्र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग सही हो ?
ठिक हो । आफ्नो हजुरआमा, आमा, श्रीमतिमाथि विभेद भएको कुरा मान्य हुदैन । अन्यका सवालमा जे गर्दा पनि हुुन्छ, तर वैवाहिक अंगीकृतका सवालमा अहिलेको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र संविधान मान्य हुुदैन ।